Czech Republic Oo Tartanka Euro Ka Reebtay 10 Ciyaartoy Oo Netherlands Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaCzech Republic Oo Tartanka Euro Ka Reebtay 10 Ciyaartoy Oo Netherlands Ah
Czech Republic Oo Tartanka Euro Ka Reebtay 10 Ciyaartoy Oo Netherlands Ah
Xulka qaranka Czech Republic ayaa usoo baxay wareegga siddeedda tartanka qaramada Yurub, iyagoo 2-0 kusoo garaacay Netherlands oo toban ciyaartoy u dheelaysay qaybtii dambe, kaddib casaan laga siiyey difaacooda De Ligt.
Netherlands oo ka mid ahayd waddamada loo saadaalinayay tartanka, isla markaana si durduro ah kaga soo gudubtay wareeggii hore ayaa ka hadhay tartanka Euro oo doorkii horena ay ka maqnaayeen.
Kulankan oo labada kooxood si adag u xaqiiltameen qaybtii hore, barbarro goolal la’aan ahna ku dhamaysteen ayaa isbeddel ku yimid daqiiqaddii 55aad markaas oo kaadh cas oo toos ah loo taagay difaaca De Ligt oo difaaca uga ciyaara Netherlands, kaddib markii uu gacanta ku qabsaday kubbad ay ku loollameen weeraryahanka Czech Rep8ublic ee Patrik Schick, taas oo looga soo daawaday VAR, kaadh toos ahna la siiyey.
Daqiiqaddii 68aad ayay Czech Republic hoggaanka u qabatay ciyaarta, markaas oo kubbad uu soo dhiibay Thomas Kalas uu gool u beddelay Tomas Holes, halkaasna waxa ka bilaabmay dabbaal-deg xilli ay Nehterlands niyad-jab ka muuqatay maadaama ay ku ciyaarayeen toban laacib.
Czech Republic ayaa sii dheeraysatay hoggaanka iyadoo toban daqiiqadood ka dhiman tahay dhamaadka, waxaana goolka labaad u dhaliyey weeraryahankooda Patrik Schick oo si xarrago leh u dhamaystiray kubbad uu ka helay Tomas Holes.
Schick ayuu goolkiisani ahaa kii afraad ee uu ka dhaliyo tartanka qaramada Yurub ee hadda socda, waxaana kaliya ka goolal badan Cristiano Ronaldo oo afar gool dhaliyey.
Daqiiqadihii dhamaadka ayay Czech Republic heshay fursado kale oo ay goolal ku dhalin karaysay, laakiin waxba kamay faa’iidaynin.
Netherlands oo qaybtii hore heshay fursado badan ayaa kala daadatay intii ka dambaysay kaadhka cas, waxaanay niyad-jab kaga hadheen tartanka oo ay si awood leh ku bilowdeen.
Czech Republic ayaa wareegga siddeedda waxay la ciyaari doonaan xulka qaranka Denmark oo xalay iska xaadiriyey siddeedda isla markaana burburiyey Wales.